Allgedo.com » Hay’adda Adeso oo afka furatay eed horay loogu soo jeediyayna iska bari yeeshay kuna riixday Hay’adaha W.F.P iyo UNICEF (Akhri qoraalo naga soo gaaray Adeso oo Soomaali iyo Ingiriis ku qoran iyo kuwo kale)
Print here| By: allgedo.com: Sunday, January 13, 2013 // Jawaabaha waa la xiray
December 25, 2012 waxaa Shabakadda Allgedo Online kusoo baxay qoraal cabasho ahaa oo uu cinwaankiisu ahaa “Ururka Samafalka ADESO oo lagu eedeeyay cadaalad daro iyo Musuq-maasuq“, kaasoo Allgedo uga yimid qaar ka mid ah Odayaal iyo Waxgarad ku sugan degmada Baladxaawo ee Gobolka Gedo.
Cabashada Odayaasha iyo Waxgaradka ayaa waxay ku saabsaneyd eedeyn balaaran oo ay u jeediyeen mid ka mid ah Ururada Samafalka ee ka howlgala Magaalada Baladxaawo oo horey loo oran jiren HORN RELIEF, balse dhowaan la baxay ADESO oo ay sheegeen in Ururkaasi uu si Cadaalad daro ah uu ku qeybiyay lacago loogu talagalay Qoysas barakacayaal ah ee ku dhaqan degmada Baladxaawo.
Odayaasha Allgedo dacwadaas usoo gudbiyay oo ay ka mid ahaayeen Nabadoon Iftiin Maxamed Cali iyo Cabdi Dheeg oo labadooduba ka mid ah Odoyaasha dhaqanka Degmada Baladxaawo lana hadlayey Warbaahinta ayaa waxay ku eedeeyeen Ururkaasi in uu musuq maasuqey lacago kaalmo ah oo loogu tala galey in la siiyo dad gaaraya ilaa 1600 oo qoys, kuwaasi oo waxyeelo ay ka soo gaartey dagaalada iyo abaaraha ku dhuftey Gobolka.
“Marar kala duwan ayaan la hadalney mas’uuliyiinta Ururkaasi in ay wax ka bedalaan qorshahooda, balse wey naga talo diideen oo waxay qorteen magacyo faalso ah oo ay doonayaan in ay ku meel marsadaan kaalmada loogu talo galey dadka dhibaateysan” sidaasi waxaa yiri Nabadoon Iftiin.
Xiriiro kala duwan oo aan la sameynay mas’uuliyiinta Ururkaasi ayaa waxay ka gaabsadeen in ay jawaab ka bixiyaan eedeynta ay u soo jeediyeen qaar ka mid ah Odoyaasha dhaqanka degmada Baladxaawo.
Haddaba, si ay isaga difaacaan eedaha loo soo jeediyay, waxaa malaalinimadii shalay Hay’adda Adeso naga soo gaaray laba qoraal oo ay noo soo gudbisay gabar la yiraahdo Anne-Marie Schryer-Roy oo ah Agaasimaha Xiriir Goboleedka iyo Wacyigelinta Adeso uuna ku saxiixan yahay nin la yiraahdo Jean-Christophe Saint-Esteben oo ah Isku duwaha Hay’adda Adeso u qaabilsan dalka Soomaaliya.
Labada qoraal ee ay Hay’adda Adeso noo soo gudbisay oo ku kala qoran laba luuqadood, balse xambaarsan dhambaal isku mid ah ayaa qofkii si fiican u akhriya uguna kuurgala waxuu ku arki karaa in uu yahay mid isburinaya, waayo; dhan qoraalka waxaa lagu sheegayaa in ay Hay’addaas ka howl gasho Degmada Balad-xaawo, wixii qalad ah ee dhacayna ay baarayaan, dhanka kalena waxaa uu qoraalku leeyahay “Hay’adda Adeso qaladka ka dhacay Balad-xaawo wax shaqo ah kuma lahan“.
Dhanka kale, waxaa qoraalka ka dhex muuqata in Hay’adda Adeso ay rabto in maamul xumada iyo musuq-maasuqa loo soo jeediyay ay iska bari yeesho oo ay eedaas dusha u saarto Hay’adaha samafalka ee W.F.P iyo UNICEF oo ay sheegtay in ay Balad-xaawo ka howl galaan, iyagana ay meelo kale ka howl galaan.
Akhri Baaragaraafkaan hoose oo aad ku arki doonto Adeso oo rabta in eeda loo haysto ay si dadban isaga riixdo W.F.P iyo UNICEF:
“Cabashadi ku saabsaneyd Baladxawo, fadlan waxad ogataan inaay Adeso howl ku leheeyn magalada Balad xawo, sababtuna ay tahay heshiis aan wada galnay deeq bixiyasha. Maxaa yelay heyadaha W.F.P iyo UNICEF ayaa horay macawino cunto uga bixinayay migalada baladxawo, adeso waxay xooga saraysay meelaha kale oo aysan hayadahu ka howlgalin. Kulan ayan layelanay odayasha degmada si aan fahfahin uga bixino arimahan. Kama aanu warhayn dadalka ay bixiyeen wariyashinu iyo sida ay ula soo xiriran shaqalahena, Mahad bay notahay hada noo shegtan goorta iyo meesha aad nagala soo xiriirteen.”
Sidoo kale, Hay’adda Adeso oo ka careysan eeda ay qaar ka mid ah waxgaradka iyo odayaasha reer Balad-xawo usoo jeediyeen ayaa waxay si kulul Allgedo ugu canaanatay in ay si sharci daro ah u isticmaashay Loogada Adeso, ayaga oo isla markaana Allgedo ka dalbaday in ay si deg-deg ah Loogadooda uga saaraan Allgedo.
Maamulka Allgedo waxuu isla shalayba si dhaqsiyo leh uga jawaab celiyay qoraalka isburinaya ee uga yimid maamulka sare ee Hay’adda Adeso iyo waliba eedda loo soo jeediyay oo ah in ay Allgedo si qalad ah u isticmaashay Loogada Adeso, taaso iyana ah eedeyn aanay wax ka jirin ee uu maamulka Adeso uu usoo jeediyay Shabakdda Allgedo.
Haddaba, si aad u aragto una akhriso fariimaha ay xambaarsan yihiin eedeyntii loo soo jeediyay Adeso, qoraalada ay Adeso rabto in ay isku difaacdo ee ay usoo dirtay Shabakadda Allgedo iyo tan uu maamulka Allgedo ugu jawaabay Adeso, waxaad ku arki kartaa Link-iyada hoose ee mid-mid u fur:
Guji xiriiriyahaan si aad u akhriso cabashada Adeso oo Soomaali ku qoran
Guji xiriiriyahaan si aad u akhriso cabashada Adeso oo Ingiriis ku qoran
Guji xiriiriyahaan si aad u akhriso jawaabtii ay Allgedo u dirtay Adeso oo Ingiriis ku qoran
Guji xiriiriyahaan si aad u akhriso edeyntii ay odayaasha B/xaawo usoo jeediyeen Adeso
Ugu danbeyntii, si loo soo afjaro dhaleeceynta dhanka maamulka ah ee ku wajahan Ururka Adeso, waxaa nala quman inuu maamulka Adeso ee xaruntiisu tahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya uu si cad meel u saaro cidda iska leh mas’uuliyadda cabashada ka imaaneysa waxgaradka iyo odayaasha reer Balad-xaawo ee la xariirta maamul xumada iyo musuq-maasuqa, iyo waliba in ay sidoo kale cadeeyaan waxa uu yahay xiriirka kala dhaxeeyay ayaga iyo Hay’adaha W.F.P iyo UNICEF markii la qeybinayay lacagaha sida la sheegay sida xun loo maamulay.
Sidoo kale, waxaa nala quman si loo ilaaliyo magaca iyo sumcadda Hay’adda Adeso ee ka howl-gasha wadamo badan oo addunka ka tirsan, in uu maamulka Hay’adda ee Nairobi dhaqsiyo uga soo jawaabo dhaleeceynta loo soo jeediyay, isla markaana uu qanciyo odayaasha ay cabashada ka timid intii ay wax kale oo aan loo joogin ku mashquuli lahaayeen.
Fiiro gaar ah: Fadlan haddii ay kuu furmi waayaan Link-iyada kore ee ay ku jiraan qoraalada Adeso iyo kuwo kale oo ku qoran PDF format noo soo sheeg si aan qoraalada uga dhigno kuwo furan oo uu qof walba akhrisan karo.
C/qaadir Mire, Muqdisho/Somalia.